Indawo yethu yivenkile endala yokubhaka kwaye irenti yibhloko eguquliweyo ezinzileyo. Indawo yokungena ingongezwa kumnyango wakho wangaphambili. Kukho igumbi elimanzi elineshawa, isinki kunye nendlu yangasese. Indawo yokuhlala ephambili inekhitshi encinci ene-dishwasher, i-cooker, kunye nefriji, itafile yokutyela kunye neesofa ezimbini ezine-tv. Ibhedi enkulu yenkosi ikwigumbi lokulala elikumgangatho ophantsi elikhokelela kwindawo yokuhlala kwaye kukho elinye igumbi lokulala phezulu.
Kukho ipatio enkulu enefenitshala, i-bbq kunye nomgodi womlilo osetyenziselwa usetyenziso lwakho olulodwa olufumaneka kwiingcango eziphindwe kabini kwindawo yokuhlala. Iintsapho ezinabantwana abancinane zifanele ziqonde ukuba kwigumbi eliphezulu lokulala alinacango kodwa linesango lezinyuko. Kukwakho nequla elingaphezulu komhlaba (elingeyokusetyenziswa lundwendwe) ngaphakathi egadini ngoko ke abantwana abancinci kufuneka babekwe esweni ngelixa bengaphandle nangona ileli isoloko isuswa ukuze ikhuseleke xa ingasetyenziswa.
E-Eythorne sine-pub yasekhaya enikezela ukutya kunye nevenkile elula ekupheleni kwendlela (imizuzu emi-2 yokuhamba). Yimizuzu engama-20 kuphela yokuqhuba ukuya kwisixeko esiyimbali saseCanterbury okanye imizuzu engama-30 ukuya kwiilwandle ezinesanti ezinokuthi iThanet ibonelele. Uhambo lwemini ukuya eFransi kulula ukuba yimizuzu eli-10 kuphela yokuqhuba ukuya kwisikhululo sesikhephe. ISandwich, iDeal, iFolkestone kunye neDover zonke ziindlela ezimfutshane kwaye zibonelela ngezinto ezininzi ezinomtsalane.
Ndifumaneka ngemibuzo okanye uncedo ixesha elininzi.